Falanqaynta Kulanka Arsenal Vs Benfica Ee Koobka Europe League
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqaynta Kulanka Arsenal Vs Benfica ee Koobka Europe League
February 25, 2021 Falanqeynta Kulamada, Horyaalada Kale, Wararka Ciyaaraha 0
Arsenal ayaa la ciyaaridoonta Benfica iyadoo Lugtii hore lagu kala nastay 1-1 ciyaar ka dhacday Rome ee Olympic Stadium, xili lugta labaad – lagu ciyaaridoona Olympiakos ‘Georgios Karaiskakis Stadium ee Athens.
Tartanka Europe League
Saacada 20:55 pm waqtiga Somaliya
Garoonka Karaiskaki Stadium
Arsenal:- Daafaca bidix Kieran Tierney ayaa ka soo laabtay dhaawac kulankii todobaadkii hore waxaana lagu soo bilaabidoonaa kulankan.
Mikel Arteta ayay u badan tahay inuu wajaho Benfica kooxdiisa ugu xoogan. Si kastaba ha noqotee, Thomas Partey wuxuu wajahayaa dhaawac kulankan si uu uga soo kabsado dhaawac muruqa ah oo garoomada uga maqnaanayo toddobaadyo.
Rob Holding ayuu dhaawac ka soo gaaray kulankii Manchester City. Daafaca ayaa wajihi doona qiimeyn dambe si loo ogaado inuu taam u yahay kulanka Benfica.
Benfica:- Jorge Jesus ayaa wali waxaa ka maqan Andre Almeida, kaasoo dhaawac jilibka ah garoomada uga maqnaan doona xilli ciyaareedkan. Kabtanka Benfica iyo daafaca daafaca Jardel ayaa sidoo kale la maqan dhaawac bowdada ah.
Labada koox ayaa ku kulmay tartan koob seddex jeer oo hore, Arsenal ayaana weli dhadhamin guul ay ka gaarto kooxda reer Portugal.
Kulankoodii ugu horreeyay wuxuu yimid wareegii labaad ee Koobkii Yurub 1991-1992 xiligaasi oo lugta hore uu ku dhamaaday 1-1 lugta xigtana waxaa 3-1 ku badisay Benfica
Arsenal ayaa hal guul kaliya ka heshay lixdii kulan ee ugu dambeeyay tartamada oo dhan.